अरुको स्वतन्त्रतामा हानी नपुगोस् भन्ने हेक्का राख्न आचारसंहिता जरुरी हुन्छ : प्रमिशा केसी - MeroReport
अरुको स्वतन्त्रतामा हानी नपुगोस् भन्ने हेक्का राख्न आचारसंहिता जरुरी हुन्छ : प्रमिशा केसी
चिकित्साशास्त्रको अध्ययनका लागि बंगलादेश जाने तयारीमा रहेकी प्रमिशा केसी फुटबल हेर्न मन पराउँछिन । उनी इंगलिश प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीकी समर्थक हुन् । सानो र मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किएकी प्रमिशा देखावटी कुरामा पटक्कै विश्वास राख्दिनन् तर आफु र आफुले रोजेको साहित्यिक क्षेत्रमा भने निकै बिश्वास राख्छिन । साहित्यीक क्षेत्रमा नै चिनिने चाहना राख्ने प्रमिशा ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै प्रमिशा केसीलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
सोसल मिडियामा आफुलाई के भनेर चिनाउन चाहानुहुन्छ?
आफ्नै नाम पृथक लागेकाले ‘प्रमिशा’ भनेर नै चिनिन्छु र चिनाउन चाहन्छु ।
साथीहरुको ब्लग पढेर धेरै अघि ब्लग बनाए पनि ब्लगिङ्ग गर्न जानेकी थिइन । आफ्नै कापीका पानामा कोरेको एक कवितालाई अरुसम्म पुर्याउन सन् २०१४ को अक्टोवरमा पहिलो पटक ब्लगलाई माध्यम बनाएँ । सुझाव र प्रोत्साहनले अरु कथा, कविता पनि थप्दै गएँ ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छॽ कस्ता विषयवस्तु तपाईको रोजाईमा पर्छन?
सधैँ आफ्नै वरीपरी घटिरहेका घटनाहरुलाई सरल भाषामा फरक दृष्टिकोणले पात्रको कथा बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु । कथा कवितामा समाजका, टिनएजर्सका, नारीका कथा लेख्न रुचाउँछु ।
तपाईले http://pkc17.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनुहुहन्छ?अनि ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ त?
शुरुवात देखि नै यही ‘नचिनेको मान्छे’ नामको ब्लग चलाउँदै आएकी छु । कथा, कविता दुबै लेख्ने गर्दछु । ब्लगिङ गर्न सजिलो भने छैन । विभिन्न रुचिका, पृष्ठभूमिका पाठक र साथसाथै आफ्नो पनि चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
सुझाव, आलोचना, प्रशंसा र प्रोत्साहन मिश्रित प्रतिक्रिया पाउँछु । यिनै प्रतिक्रियालाई आत्मसात गरि लेखिरहन्छु ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरु ब्लगिङप्रति आर्कषित भईरहेका छन । नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग ?
ब्लगिङ नहुँदो हो त सायद कापीका अन्तिम पानामा, डायरीमा कैद भएर बस्ने कति मनका कुरा अरुसम्म पुग्ने थिएनन् । सामाजिक सञ्जालसँगै बाँच्न सिकेका हामी युवालाई ब्लग एक थलो बनेको छ । दुरुपयोग नभएका नहोलान् तर म यसको सदुपयोग नै भइरहेको देख्छु ।
ब्लगरले आफ्नो विचार पोख्ने स्वतन्त्रता जरुरी छ । तर पनि अरुको स्वतन्त्रतामा हानी नपुगोस् भन्ने हेक्का राख्न आचारसंहिता जरुरी हुन्छ ।
मैले पढेका ब्लगमा आचारसंहिताको उल्ङ्घन पाएकी छैन ।
कथा ‘अबोर्सन’ ब्लगमा मेरो पहिलो र धेरैले मन पराएको कथा थियो । त्यसका लागि गर्भावस्था परिक्षक साधनको भाउ बुझ्न मेडिकल स्टोर-स्टोर चहारेर हिँडेकी थिएँ । पछि धेरैले “ल हामीलाई आफ्नो बेलामा आपत परे प्रमिशाको कथा काम लाग्ने भयो ।” भन्दै ठट्टा गरे ।
पत्रकारिता भन्दा ब्लगिङ भिन्न हुन्छ । यो स्वच्छन्द हुन्छ । यी दुईलाई दाँज्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
साहित्यमा रुचि हुनाले नै ब्लगिङ गर्न थालेकी हुँ । त्यो बाहेक भने गीत सुन्न, गाउन, फुटबल हेर्न, खेल्नको साथसाथै नयाँ र पुराना ठाउँ फुर्सदमा एक्लै घुम्न रुचाउँछु ।
हालसम्म भने आफ्ना रुचीलाई ब्लगमा उतार्न सकेकी छैन । तर कुनै दिन एक फुटबलप्रेमी महिलाको रुपमा कथामा मनका कुरा पोख्ने धोको छ ।
अर्थ थाहा नभएको आफ्नो नाम ‘प्रमिशा’ लाई आफ्नै अर्थ दिन अग्रसर छु । यसैमा अर्को खुड्किला ‘साताको ब्लगर’ को संज्ञा दिनुभएकोमा ‘मेरो रिपोर्टको’लाई हृदयदेखि धन्यवाद ।
Comment by Prakash Lamichhane on January 15, 2015 at 3:21pm
बधाई छ प्रमिशालाई । :))
Comment by Amuna Chapagain on January 14, 2015 at 2:26pm
Congratulations Pramisha !!
Comment by MeroReport on January 14, 2015 at 2:00pm
Congratulations Pramisha Ji !